I-Holland | Punch & die Inkxaso yezobugcisa | Ukucombulula iingxaki
Ngaba unayo nayiphi na kwezi ngxaki?
I-Holland ndasisombulula iingxaki ngabavelisi beethebhule iminyaka emininzi. Inkxaso yethu yobuchwephesha kunye nenkxaso yokufa isombulula amawaka eengxaki zokuvelisa idosi eqinileyo kwihlabathi liphela unyaka nonyaka. Iinjineli zoyilo zethu zisebenza ngokubambisana nawo onke amasebe abandakanyekayo kuyilo lweethebhulethi kunye nemveliso evela kuphando kunye nophuhliso kusetyenziswa uvavanyo kunye nobungakanani, zikwanokuncedisa ngokuhambisa imveliso.
Ukuncamathela yenye yezona zinto zijamelene nabavelisi bethebhulethi. Kukunamathela kwezi granules kwincam yethhiphu yobuso kunye nodonga lokufa ngexesha lokuvelisa. Ngelishwa, ukunamathela kunokubangelwa zizizathu ezahlukeneyo kwaye akusoloko kunqunyulwa ngokucacileyo.
Imicimbi eqhelekileyo ehambelana nokunamathela:
Ukucothisa imveliso ngenxa yolondolozo olufunekayo
Ibangela iingxaki kwiinkqubo ezisezantsi ezinjengokubhabha
I-Holland ineezisombululo ezahlukeneyo zokuncedisa ukulwa nokunamathela kubandakanya, i-TSAR ~ Ukuqikelela, imigqakhiso yokuchasana nentonga kunye nesitayile nokunye okuninzi.
Jonga imeko yethu yophando kunye neNovartis apha.
Ukuchola, ukuze ungabhidaniswa nokuncamathela, kuxa uxinzelelo lwegranule lunamathele kwiinkcukacha zepunch kwaye lukhokelela 'ekukhetheni' iinxalenye zobuso bethebhulethi.
Imicimbi eqhelekileyo enxulumene nokukha:
Ukuphulukana kweenkcukacha ukuya kwi-embossing yobuso bethebhulethi
Nangona ezinye izisombululo ezichaphazela ukunamathela zinokukunceda ukhethe imiba, ukuhlala unamathela kwaye kukhetha imiba emibini eyahlukeneyo.
I-Abrasion okanye ukunxiba kwezixhobo kukususa izinto ezinokukhokelela kwimicimbi yokubeka etafileni enkulu. Kwiimeko ezininzi, kungenxa yesikhuni esetyenzisiweyo ngexesha lenkqubo yokwenza.
Ukunxiba isixhobo asikho yodwa kwincam ye-punch kwaye kunokuthi kwenzeke kwi-punch barrel, entloko ye-punch okanye ngaphakathi kwi-die bore.
Imicimbi eqhelekileyo ehambelana ne-abrasion yile:
Nxiba iinxalenye zamacwecwe ecwecwe
Jonga imeko yethu yokufunda noThomson kunye noCapper apha.
I-Corrosion yinkqubo yendalo edala ukutshutshiswa ngokuthe chu kwezixhobo ngenxa yempembelelo yeekhemikhali. Malunga nokuhambelana kwethebhulethi, oku kusoloko kuvame ukuba kuphakathi kwegranate kunye nesixhobo.
Imicimbi eqhelekileyo ehambelana nokudibanisa ibandakanya:
Umonakalo kumacwecwe ecwecwe itafile